Lungiselela ukuxhumana kwe-SSH ngaphandle kwephasiwedi ngezinyathelo ezi-3 nje | Kusuka kuLinux
Setha ukuxhumana kwe-SSH ngaphandle kwephasiwedi ngezinyathelo ezi-3 nje
Lapha uzobona ukuthi ungaxhuma kanjani kwi-PC ukude nge ssh ukufaka nje iphasiwedi okokuqala ngqa, lapho-ke noma singaqala kabusha womabili amakhompyutha, ngeke siphinde sicelwe iphasiwedi.
Kepha, ake siqale sibone incazelo emfushane ukuthi iyini ssh:
ssh kuyisivumelwano, indlela yokuxhumana phakathi kwamakhompyutha amabili. Kusivumela ukuphatha iqembu kude. Lapho sifinyelela kwenye ikhompyutha nge-SSH, umyalo esiwufaka kuleso siginali uzokwenziwa kwenye ikhompyutha, ngale ndlela siyiphatha / siyilawule.
Konke okudluliswa ngu ssh, ibhalwe ngemfihlo futhi inokuvikeleka okuhle kakhulu.
Manje, sizobona ukuthi ngezinyathelo ezintathu nje sizokumisa kanjani I-PC # 1 ukufinyelela I-PC # 2 ngaphandle kokufaka iphasiwedi:
PC # 1 - » Ufuna ukuxhumeka ku- I-PC # 2, ngaphandle kokufaka iphasiwedi njalo uma uzama ukuxhuma kule PC.
PC # 2 - » Uneseva ye-SSH efakiwe. Lona omunye I-PC # 1 izoxhuma, futhi izokwenza lokho ngaphandle kokufaka iphasiwedi. Kule PC kunomsebenzisi ogama lakhe lingu- izimpande.
1. En I-PC # 1 sibhala okulandelayo:
Lokhu kuzokhiqiza ukhiye womphakathi. Ukuze ungadideki kakhulu "nezikhiye zomphakathi nezangasese", ngizochaza kalula.
Ake sithi unokhiye ababili bendlu yakho ephaketheni lakho, esisodwa usinikeza intombi yakho njengoba nihlala ndawonye, ​​kuthi ngesinye nisale sodwa, aninikezi muntu. Yebo, lowo khiye owunikeze intombi yakho uzomvumela ukuthi angene endlini yakho ngaphandle kokukutshela, ngaphandle kokucela imvume yakho, akunjalo? ukhiye womphakathi lowo, "ukhiye" ovumela i-PC eyodwa ukuthi ifinyelele kwenye ngaphandle kokucela imvume yakho (okungukuthi, ngaphandle kokufaka igama lomsebenzisi + iphasiwedi)
Lapho bebeka lowo myalo, lokho kuzovela:
2. Vele ucindezele [Faka], umzuzwana kamuva siphinde sicindezele [Faka], futhi umzuzwana kamuva sicindezela futhi [Faka]. Ngisho ukuthi, besizocindezela [Faka] sezizonke izikhathi ezintathu (3), sizicindezela kuphela ... asibhali lutho 🙂
Lapho senza lokhu, okuthile okufana kakhulu nalokhu okulandelayo kuzovela:
Silungile, sesivele sinokhiye womphakathi ... manje sidinga ukuwunikeza noma ngubani esimfunayo (njengesibonelo, awunike intombi yethu haha)
Esikufunayo yilokho I-PC # 1 xhuma ku- I-PC # 2, isivele ingenile I-PC # 1 sikwenze konke okungenhla, ku I-PC # 2 Akukho esikwenzile. Kuhle, I-PC # 2 inekheli le-IP ngokwesibonelo 10.10.0.5.
3. Sifaka I-PC # 1 Okulandelayo:
Lokhu okwenzayo kumane kukunikeze ukhiye womphakathi we I-PC # 1 a I-PC # 2, okungukuthi, kunikeza I-PC # 2 ukhiye womphakathi we I-PC # 1ngenkathi I-PC # 1 ugcina ukhiye wakhe wangasese, uyazi; ukhiye onganikezwa noma ngubani. Kubalulekile ukuthi ungenzi amaphutha nomsebenzisi, okusho ukuthi, uma umsebenzisiizimpande"Ayikho ku-PC # 2, izosinika iphutha, kubalulekile ukuthi kucace ukuthi yimuphi umsebenzisi esizomsebenzisela lokhu, ngaphezu kweqiniso lokuthi lowo msebenzisi esimlungiselela ukufinyelela ngaphandle kwephasiwedi, uzoba okufanayo nathi okuzofanele sikwazi ukufinyelela kukho ngokuzayo. Uma lokhu sekwenziwe, kufanele kubukeke kanjena:
Esinyathelweni esedlule, kufanele bafake iphasiwedi yomsebenzisi ku- I-PC # 2.
Futhi i-voila ... konke kumisiwe 😀
Njengoba kubonakala ku-terminal, ake sihlole ukuthi ngabe konke kusebenze ngempela ngo-100% KULUNGILE. Ukuhlola, sibeka:
ssh (i-imeyili ivikelwe)
Uma befuna ukufinyelela kwenye ikhompyutha futhi ngaphandle kokufaka njalo iphasiwedi (I-PC # 3 ngokwesibonelo), simane sikunikeze ukhiye wethu womphakathi bese kuba yilokho, okungukuthi, uma sesisenzile isinyathelo #1 y #2 ngeke sisakwenza lokho. Uma sifuna ukufinyelela I-PC # 3 ngokwesibonelo, ene-IP 10.10.99.156 sibeka nje:
Kuze kube manje isifundo.
Chaza ukuthi izinga lezokuphepha lapho sikhuluma nge-SSH liphezulu impela, isingathekiso engichaze ngaso ezinye izinyathelo (leso sokunikeza ukhiye wentombi yethu) kungenzeka singabi i-haha efaneleke kakhulu, ngoba intombi yethu inganikeza omunye umuntu ukhiye. Lapho sikhuluma nge-SSH, imigomo yokuphepha kulula ukuyichaza, lapho sizama ukufinyelela kwikhompyutha yethu (I-PC # 1) kubheka ukuthi ngabe ku-PC # 2 kukhona ukhiye womphakathi wekhompyutha yethu (kulokhu kukhona, ngoba siyilungisa ngaleyo ndlela), uma-ke kukhona eyodwa, kulula, hlola ukuthi ngabe ukhiye womphakathi ulingana ncamashi ukhiye wethu wangasese (lowo esingazange siwunikeze noma ngubani). Uma okhiye bayafana kusivumela ukuthi sifinyelele, ngaphandle kwalokho futhi njengenyathelo lokuphepha, akusivumeli ukuthi singene kude kwenye ikhompyutha.
Ngakho-ke manje uyazi ... ukunikeza intombi yethu ukhiye wendlu akuyona into ephephe kakhulu, kepha ukwaba okhiye nokufinyelela kwenye ikhompyutha ukude ngeSSH kuphephile ^ _ ^
Ukungabaza noma imibuzo, izikhalazo noma iziphakamiso zingazise.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-GNU / Linux » Setha ukuxhumana kwe-SSH ngaphandle kwephasiwedi ngezinyathelo ezi-3 nje
Angiqondi ngempela ukuthi kungani ubambeke kangaka kwezokuphepha wenza iphutha elinje. Uma kusinyathelo lapho ithi:
Asibhali lutho, silahlekile uma umsebenzisi ekwazile ukungena kwi-PC yethu futhi avule i-terminal, ngoba isebenza ngokuzenzakalelayo:
Izongena ngaphandle kokucela iphasiwedi.
Uma othile ethola ukufinyelela kwi-laptop yami, yebo, angangena kwi-PC # 2 ngaphandle kokufaka iphasiwedi yayo, noma kunjalo, njengoba usho, ngiphikisana nokuphepha, ucabanga ukuthi ukuthola ukufinyelela kwi-laptop yami kuyinto elula kangako? HAHA.
Lapho ngihlala ngivuka, ngihlala ngikhiya isikrini, ngaphandle kwalokho ngemuva kwemizuzwana engama-30 akukho msebenzi egundaneni noma kwikhibhodi ye-laptop, isazokhiya
Uma othile entshontsha i-laptop yakho, noma ngabe iseshini ivinjiwe kangakanani, ukuthola ukufinyelela kwamafayela kuyinto encane, indaba yemizuzu emi-5 eneLinux bootable esuka ku-USB. Futhi uma amafayela esefinyelelwe, njengoba ukhiye wangasese ungavikelekile, ungawusebenzisa ngqo, noma uwukopishe kangcono futhi ufinyelele kunoma yimaphi amaseva akho ngokunethezeka usuka ekhaya lakho. Empeleni, inqubo ishesha kakhulu kangangokuthi ngeke uze wazi. Emaminithini ama-5 uya endlini yangasese noma yini, konke kungenziwa.
Indlela ephephile ukubeka iphasiwedi kukhiye oyimfihlo, bese usebenzisa i-ssh-agent ukuze ikhumbule iphasiwedi yaso sonke isikhathi (vele ssh-engeza). Ngale ndlela, izocela kuphela i-password okokuqala, futhi ngokwenza njalo uzoba nokuxhumeka ngaphandle kwephasiwedi engu-90% yesikhathi, ngaphezu kokuvikelwa ekwebeni noma ekungenelweni.
Ingabe akulutho ukufinyelela amafayela? Wake wezwa ngokubethela okugcwele kwediski? (luks + cryptsetup)
Yebo, kunjalo, uma unayo yonke i-disk ebethelwe kungenye indaba, kepha abasebenzisi abangama-90% abayenzi ngoba abazi ukuthi bangayenza kanjani futhi ezimweni eziningi ayibanxephezeli. Ngokuphambene nalokho, ukungalondolozi amaphasiwedi angabhalwanga noma okhiye abayimfihlo abangazivikelekile kudiski yinto wonke umuntu angayenza, futhi ukwenza okuhle ngokuvamile.
Ukugcina okhiye abazimele abangazivikele kudiski ebethelwe kufana nokupaka imoto yakho ushiya iminyango ivulekile, kepha ukuqasha unogada ngeDoberman ukuyivikela. Kuyasebenza, yebo, kepha kulula kakhulu futhi kusebenza kahle ukuyikhiya ngqo.
I-MMm ayenzi kangako ku-blowjob, noma ingakha i-interface ebonakalayo, inikeze i-IP futhi ixhumane naleyo IP ebonakalayo, ngakho-ke noma besusa ukhiye ngeke bakwazi ukuthola umshini ngoba ukhiye usebenza kuphela i-IP ethile. Kuya futhi nokuthi bafuna ini, kusebenza kimi ngokuphelele njengoba umlingani ekuchaza, ngine-server yangasese ekhaya lami angidingi ukukhulisa ukuphepha ngoba ine-VPN emisiwe.
Futhi konke lokhu kungasebenza ku-windows terminal okufanele ixhumeke kuma-NIX amaningi?
Ngine-putty kepha ngiyakwazi futhi ukusebenzisa iSecurecrt (manje sengiyibhalile)
Ku-Windows terminal (cmd) ngiyaqiniseka ukuthi cha, ngeke kwenzeke lapho.
Kodwa-ke uma usebenzisa uPutty ungayizama, ingasebenza.
Ngiyabingelela futhi wamukelekile kusayithi lethu 😀
UPutty usevele wamukela ipharamitha ye -pw ngemiyalo eyengeziwe. (isib: -pw12345)
Eqinisweni, iSuper Putty ipholile kunePutty elula. (Uhlaka lukaPutty)
Ngakho-ke akudingeki ukuthi uyibeke.
Siyabonga ngokuthunyelwe, kuyasiza kakhulu. Kuyisicefe ukungena ngemvume ku-SSH ngayo yonke into.
Sawubona futhi ngiyabonga kakhulu ngokuhambela kwakho nokuphawula 🙂
Akunalutho mngani, kuyintokozo ukwazi ukuthi bekulusizo ... uma singakusiza nganoma iyiphi enye indlela, sijabule kakhulu
Ngiyabingelela futhi wamukelekile kusayithi.
Ngidinga ukuxhuma kwi-windonws pc kusuka ku-linux yami njengoba ngenza kusuka esigungwini sami
Kuhle kakhulu .. kuyakhuthaza impela ukubona lolu hlobo lokufundisa, kungenza ngifune ukufaka isandla kokuhlangenwe nakho kwami ​​okwenziwe lula ukuze umphakathi ukwazi ukuzisebenzisa. Ngiyabonga ngempela kusuka e-El Salvador.
UJose Gregorio kusho
Ngixhuma umshini onobuntu kulowo one-debian kepha unginikeza iphutha lapho ungeke ukwazi ukugunyaza ngakho-ke ungibuza iphasiwedi .. kungani lokhu kuzokwenzeka? Ingabe ngukuthi izinhlobo ze-ssh-keygen ziyehluka noma kwenzakalani?
Phendula uJose Gregorio
Beka lapha iphutha elikunikeza lona ukuze ukwazi ukukusiza kangcono 😉
Futhi, ungazama ukubeka lokhu ku-terminal:
Lokhu okwenzayo kuhlanza ukuxhumana (umlando wokuxhuma) i-SSH oke waba nayo.
Futhi uma bengifuna ukusebenzisa ukhiye womphakathi ofanayo kumaseva amaningana, bengingakwenza, noma kufanele ngenze ukhiye kwiseva ngayinye engifuna ukufinyelela kuyo? Ngizozama noma kunjalo, kepha kuseva ethile engenamsebenzi ukuze ungonakalisi okuthile okuwusizo.
Njengoba ngikwenzile kukhompuyutha ephathekayo, kungukhiye ohlukile kwiseva ngayinye, empeleni, ngicabanga ukuthi akunakwenzeka ukusebenzisa ukhiye ofanayo kwabaningana ... ngoba i-ID yeseva ngayinye ihlukile, njengezigxivizo zeminwe 🙂
Sawubona nkosi yesihlabathi. Bengilokhu ngifunda okhiye futhi ngithole ukuthi izikhiye ezimbili (ezomphakathi nezangasese) zisebenzela iklayenti-leseva ukuthumela nokwamukela izinselelo futhi ngaleyo ndlela likhombane, ngakho-ke alihlangene nephasiwedi oyisebenzisayo ukufinyelela kuseva, lesi sakamuva sisetshenziselwa "ukunamathisela" ukhiye womphakathi kwabathembekile besiphakeli. Ngakho-ke ungayisebenzisa ngobuningi njengoba ufuna noma udinga.
Angazi noma ngizichazile yini, kepha ihlaya ukuthi ukuze usebenzise ukhiye wakho kwamanye amaseva, ngemuva kokulandela okokufundisa kwakho, kufanele wenze nje:
i-ssh-ikhophi-id enye i-.user@otra.ip
bhala iphasiwedi yakho yale enye iseva
Sawubona, ngiyabonga ngomqondisi, bekunguye kuphela ongisizile. Manje njengoba ngifuna ukukwenza kwenye i-pair yamakhompyutha ngithola okulandelayo:
$ ssh-ikhophi-id -p 4000 lm11@148.218.32.91
Itheku elibi 'umask 077; isivivinyo -d ~ / .ssh || mkdir ~ / .ssh; ikati >> ~ / .ssh / Author_keys '
Ngikwenzile ositshele khona, kepha kuqhubeka kungibuza iphasiwedi. Ngicacisa lokhu kuxhumana engikwenzayo phakathi kwamaseva amabili we-linux hat hat ... Yini enye engaba yiyo?
Ngivele ngabheka ifayili le / etc / ssh / sshd_config
Sengivele ngiwaqale phansi womabili amaseva
I-PC2 = isigqoko esibomvu se-linux 6.4
I-PC2 = isigqoko esibomvu se-linux 5.1
Insiza ye-ssh kufanele ihlelwe kahle (/ etc / ssh / sshd_config file on PC2) ukuze isebenze.
I-PC2 = Isigqoko Esibomvu 5.1
Sawubona ozakwethu, nginesidingo sokwakha ubudlelwano bokuthembana phakathi kweseva eyi-1 Linux Centos 5.3 ne-Unix Sco5.7 kepha nginenkinga yokuthi lapho ngenza isinyathelo 3 sokukopisha ukhiye kusuka ku-Linux kuya ku-Unix ngithola umyalezo / usr / bin / ssh-copy-id: ERROR: Akukho ubunikazi obutholakele, kungani kungaba njalo?
Ngilandele igxathu lokufundisa igxathu negxathu. Akunginiki phutha, kepha ekugcineni lapho ngixhuma kusuka ku-PC1 kuya ku-PC2 kulokhu kungibuza iphasiwedi yempande njalo lapho ngixhuma.
Ngabe ukhona ocabanga ukuthi kungaba yini?
Kubukeka sengathi ngemuva kokwenza ukhiye kufanele usebenzise i-ssh-add ukuze i-ejenti yokufakazela ubuqiniso ikwazi ukuyisebenzisa.
u-andrea colodro kusho
Njengoba ngisusa ukhiye wokungena, awuboni lutho, ngigqekezelwe, ngisizwa, akungeni lutho
Phendula ku-andrea colodro
I-Jordan acosta kusho
Ngiyabonga kakhulu, kusebenze kahle
Phendula kuJordani Acosta
Ngibonga kakhulu umhlahlandlela! Kulula kakhulu futhi kuyasiza uma unamaseva akho lapho ehamba futhi kungadingeki ukuthi ufake okhiye futhi ngaleyo ndlela uguqule izinto 😀
Bengingazi ukusetshenziswa kwe-ssh-copy-id futhi bekuvele kuzenzakalela.
Iqiniso ukuthi ngangisezingeni lokuthi ngibhale i-password, ngakho-ke engikwenzayo ukukugcina nge-DEFAULT paraphrase, egcinwa ngesikhathi seseshini.
Angikhathali ukuyibhala kanye njalo lapho ngivula i-PC, umqulu kufanele uwubeke njalo lapho unqamula noma izinto ezinjengalezo 😀
I-SSH Ayikho iJutsu!
isifundo esihle ... kepha uma ngifuna ukudlulisa imininingwane ??? ngingakwenza kanjani?
diego gonzalez kusho
Sawubona, umnikelo wakho uthakazelisa kakhulu, kepha nginokungabaza okumbalwa ngesihloko esifanayo
Phendula ku-diego gonzalez
UCarlos Hernandez kusho
Zama izinyathelo ezingenhla, kepha lapho uzama ukukopisha ukhiye kwiseva 2 (PC2) kungitshela ukuthi umyalo awukho.
bash: ssh-copy-id: umyalo awutholakalanga
Ngingakwazi ukukopisha ukhiye ngesandla?
Phendula uCarlos Hernandez
Heidy kusho igama kusho
Kuhle kakhulu !! Bengifuna incazelo elula futhi isebenza kahle
Ngiyabonga kakhulu, kungisizile kakhulu.
Sawubona, ngicabanga ukuthi ngabe ikhona yini indlela yokwenza lo myalo we-ssh-copy-id. Njengoba ngifaka i-Open ssh ye-Windows, i-ssh iyangisebenzela ku-DOS kepha ayinayo lo myalo we-ssh-copy-id. Ngingathanda ukwazi ukuthi ungawuthumela kanjani lo khiye womphakathi kwenye iseva ye-linux (i-linux server). Ngibonga kakhulu.
Sawubona. Ngidinga ukusungula ubudlelwano bokuthembana phakathi kweseva ye-linux nomshini weWindows. Faka i-SSH yeWindows futhi iyangisebenzela. Kepha lo myalo we-ssh-copy-id awutholakali kuleli thuluzi.
Bayazi ngenye indlela yokukwenza ngaphandle kokusebenzisa i-ssh-copy-id.
Kepha umbuzo walokhu ukuthi ukwazi ukuxhuma ngaphandle kwephasiwedi, uma sibeka umushwana wokungena kuzosicela lelo phasi lixhume futhi bekungeyona inhloso yalokhu
Kube wusizo olukhulu kimi ngemodyuli yekhompyutha yami ye-fp, ngiyabonga 🙂
Abanye bakhathazeka ngokuthi kungacasula kanjani ukufaka iphasiwedi (umushwana wokungena), ngoba lokho, njengoba besho ngenhla, yi- «user-Agent» nokuthi nami ngiyilungiselele nge-Keepass nomsebenzi wayo wohlobo lwe-Auto, ngakho-ke Ngimane ngincenge i-terminal futhi ngokuhlanganiswa kokhiye abayilungiselele ngomumo, futhi ngine- "aliases" yesicelo ngasinye futhi konke kulula kakhulu.
Zijabulise kakhulu !!
UFelipe Oyarce kusho
Ulwazi oluhle kakhulu 🙂 kepha nginombuzo ...
Ngine-PC10 okuyilapho ngigcina khona imininingwane, imininingwane ithunyelwa isuka ku-pc1 - pc2 - pc3, iye kwi-PC10, ngingenza kanjani ukuthi i-pc1, i-pc ne-pc3 zisebenzise ukhiye ofanayo ukufinyelela i-PC10 ngaphandle kokhiye.
Phendula ku-Felipe Oyarce
Ngingakubhala kanjani okuku-machine1 ku-machine2's bash ngaphandle kokuya ku-ssh ip @ hosts kubashini bomshini1. Angazi noma ngiyayiqonda yini i-xD
Iminyaka eyi-10 isidlulile le ncwadi futhi ngihlala ngiyivakashela noma nini lapho ngiyidinga. Njengamanye ama-tutorials lapha abeke ukuhlolwa kwesikhathi. Siyabonga futhi maqondana!
Iskripthi ukuqala kabusha nokubuyisa iseshini yethu ku-Xfce